« Raharaha mamohehitra…! » -
AccueilTresaka« Raharaha mamohehitra…! »
« Raharaha mamohehitra…! »
24/12/2018 admintriatra Tresaka 0
Manao ny vahoaka malagasy ho vendrana mihitsy ireto mpanao politika sy manam-pahefana sasany, ao anatin’izao fikirakirana ny voka-pifidianana izao. Izy ireo ihany mantsy no tsy mahita na mody tsy mahita ireo fahotana mahafaty nitranga nandritra izao fifidianana izao. Mibaribary anefa fa ny mifanohitra tanteraka amin’ny fomba fijerin’izy ireny ny an’ny vahoaka malagasy amin’izao fotoana izao. Samy nahita ohatran’ny rehetra, fa nisy ireo nanao herisetra sy fikasihan-tanana nandritra ny fiatrehana ny fampielezan-kevitra. Tsy azo lavina ihany koa ny fisian’ireo karapanondro sandoka. Manginy fotsiny ny fahitana ireo karatry ny mpifidy marobe mbola tavela teny anivon’ny fokontany.
Raha ny filazan’ny kandidà laharana faha-13 nandritra ny adihevitra voalohany tao amin’ny TVM, dia hoe: tezitra ireo lehiben’ny fokontany, satria mbola tsy naharay ny karamany am-bolana maro, ka izay no nahatonga ireo kara-pifidianana maro mbola tavela teny anivon’ireny fokontany ireny. Ireto farany izay noraisin’ity kandidà ity nandritra ny fotoan’ny fampielezan-kevitra, ary taorian’izay no nampikatso ny fizarana ireny karatry ny mpifidy ireny. Tranga tena mampametra-panontaniana ny hoe: ny minisitry ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana ve no tsy nahaloa ny tambin-karaman’izy ireo, dia ny mpifidy no nosaziana? Raharaha roa samihafa mihitsy mantsy izany, ary helohin’ny lalàna ny manary ny zon’ny olom-pirenena tahaka izany.
Ampahany ihany ireo voalaza ireo, fa mbola maro lavitra noho izany ireo tranga namoafady nandritra ny fanomanana sy ny fikirakirana izao fifidianana izao. Antony nahatonga ny kandidà laharana faha-25 nampiaka-peo, ary tsy hanaiky raha tsy ny safidim-bahoaka marina no hivoaka amin’izao fifidianana filoham-pirenena izao. Maro ihany koa ankoatra izay ireo sehatra hitondran’i Marc Ravalomanana sy ireo mpanara-dia azy izao raharaha mamohehitra eto amin’ny firenena izao. Mbola vao manomboka izany ity raharaha ity, ary azo antoka fa mbola hitohy.
Miady fo mafy ny hahazoana ny minisiteran’ny Atitany ny Mapar. Mipetraka ny fanontaniana hoe : “ nahoana no mikatsaka mafy ny minisiteran’ny Atitany izy ireo ? Maika hangala-bato ? Izay rehetra manelingelina ny fahazoan’ny Mapar ...Tohiny
Asa soa ataon’ i Voahangy Rajaonarimampianina : Betsaka ny tsy mahazaka ny fahombiazany